South Africa’s Ruling ANC Heads To Zimbabwe For Talks - dominicjonesjewelry.com
Home » World News » South Africa’s Ruling ANC Heads To Zimbabwe For Talks
A delegation from South Africa’s ruling African National Congress party is expected in Zimbabwe on Tuesday for talks, less than a month after Harare rebuffed Johannesburg’s offer to help end its neighbor’s economic and political crisis.
The delegation will meet with officials from the ruling Zimbabwe African National Union Patriotic-Front party and the government, Nick Mangwana, a Zimbabwean government spokesman, said by text message on Sunday.
Tafadzwa Mugwadi, the Zanu-PF director for information and publicity declined to say what was on the agenda of the talks when contacted for comment. Calls to ANC spokesman Pule Mabe’s mobile phone weren’t immediately answered.
Zimbabwe’s state-owned Sunday Mail newspaper reported that Ace Magashule, the ANC’s Secretary-General would lead the 10-member South African delegation.
U.S. Urges Southern Africa to Help Resolve Zimbabwe’s Problems
South Africa Raises Red Flag Over Reports of Zimbabwe Abuses (1)
Previous Article Tesla's cars are too expensive, and Elon Musk knows it — here's why that could be a big problem for the electric-vehicle leader
Next Article Treasury Secretary Mnuchin expects Congress will extend government funding into December